Tor 0.4.3.5 inouya inovandudzwa kubva Python 2 kusvika 3 uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veiyo Tor chirongwa vakazivisa kuvhurwa kwebazi idzva rakatsiga reprojekti, ichi chiri icho chitsva vhezheni "Tor 0.4.3.5" mune dzimwe shanduko dzakakosha dzakaitwa.
Tor 0.4.3.5 inozivikanwa seyekutanga vhezheni yakagadzika yebazi 0.4.3, iyo yakagadziriswa mumwedzi mishanu yapfuura. Bazi 0.4.3 ichave ichiperekedzwa neyakajairwa yekuchengetedza kutenderera: kutumira zvinyorwa ichamiswa mwedzi mipfumbamwe kana mwedzi mitatu mushure mekubuditswa kwebazi 9.x.
Yakareba rutsigiro kutenderera (LTS) yakapihwa iyo 0.3.5 bazi, iyo yekuvandudza iyo ichaburitswa kusvika Kukadzi 1, 2022, nepo kutsigirwa kweshanduro 0.4.0.x na0.2.9.x kwakamiswa uye Kutsigira yeshanduro 0.4.1.x ichapera muna Chivabvu 20 uye 0.4.2.x munaGunyana 15.
Kune avo vachiri kusaziva nezve iyo Tor chirongwa (Iyo Onion Router). Ichi chirongwa chine tarisiro huru kuvandudza network yekutaurirana yakagoverwa ne low latency uye yakasimudzwa pamusoro pe internet, umo kufambiswa kwemashoko kuchinjana pakati pevashandisi hakuratidze hunhu hwavo, ndiko kuti, iyo IP kero (kusazivikanwa padanho reneti) uye izvo, mukuwedzera, inochengetedza kuvimbika uye kuvanzika kweruzivo rwunofamba napo.
Iyo sisitimu yakagadzirirwa nekuchinjika kunodiwa kuitira kuti ikwanise kuita kuvandudzwa, kuendeswa mune chaiko nyika uye inogona kumira mhando dzakasiyana dzekurwisa. Nekudaro, ine isina kusimba mapoinzi uye haigone kutariswa seyakaoma system.
1 Chii chitsva muTor 0.4.3.5?
1.1 Ungawana sei Tor 0.4.3.5?
Chii chitsva muTor 0.4.3.5?
Mune iyi vhezheni itsva shanduko mukutsamira inosimbiswasezvo izvozvi zvave kuda yepamusoro sisitimu inodikanwa yekuvaka izvozvi Python 3 inodikanwa kumhanyisa bvunzo, nepo Python 2 isingachatsigirwi nekuda kwekuguma kwekutsigirwa kweichi Python bazi.
Padivi rekuchinja, zvinoratidzika kuti kugona kuunganidza pasina kusanganisira kudzoreredza kodhi kwakaitwa uye dhairekitori server cache. Kuremadza kunoitwa uchishandisa "-disable-module-relay" sarudzo kana uchimhanyisa script yekumisikidza, iyo zvakare inoremadza kuungana kwe "dirauth.
Naizvozvowo kuiswa kweyekuwedzera mashandiro anodikanwa kushanda masevhisi akavanzika based Mune yechitatu vhezheni yeprotocol neOnionBalance balancer, iyo inokutendera iwe kuti ugadzire zvinotyisa zvakavanzika masevhisi anomhanya pane akawanda backend neako ako Tor zviitiko.
Mukuwedzera mirairo mitsva yakawedzerwa ye maneja magwaro anoshandiswa kubvumidza zvakavanzika masevhisi: ONION_CLIENT_AUTH_ADD kuwedzera magwaro, ONION_CLIENT_AUTH_REMOVE kubvisa zvitupa uye ONION_CLIENT_AUTH_VIEW kuratidza runyorwa rwezviratidzo.
Chiratidzo chitsva chawedzerwa "Yakawedzerwa Zvikanganiso" ye SocksPort, iyo inobvumidza iwe kuti uwane yakadzama ruzivo rwekukanganisa.
Pamusoro pemhando dzema proxy dzakatsigirwa kare (HTTP Batanidza, SOCKS4 uye SOCKS5), iko kugona kwekubatanidza kuburikidza neHAProxy server kunowedzerwa. Iko kuendesa kunogadzirirwa pachishandiswa paramende «TCPProxy : »Mune torrc nechiratidzo cheprotocol se« haproxy »
Dhairekitori maseva akawedzera rutsigiro rwekukiya ed25519 relay makiyi vachishandisa yakabvumidzwa mairaira faira (yaimbove chete RSA makiyi aigona kukiyiwa)
Uye zvakare inojekesa zvimwe zvakagadziriswazve maficha ane chekuita neanoshanda mashandiro uye kugadzirisa kugadzirisa.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi vhezheni nyowani, unogona kutarisa izvo zvinyorwa mu chinotevera chinongedzo.
Ungawana sei Tor 0.4.3.5?
Kuti uwane iyi vhezheni itsva, ingo enda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti uye muchikamu chayo chekurodha tinokwanisa kuwana kodhi yekodhi yekuumbwa kwayo. Unogona kuwana kodhi yekodhi kubva ku inotevera chinongedzo.
Panguva yechinhu chakakosha chevashandisi veArch Linux tinogona kuchiwana kubva kuAUR repository. Chete panguva iyo pasuru isati yagadziriswa, unogona kuitarisa kubva pane inotevera chinongedzo uye nekukurumidza painowanikwa iwe unogona kuita iyo yekuisa nekunyora iwo unotevera kuraira:
Kana ari mapakeji anosanganisira nyowani Tor browser, anofanirwa kuwanikwa mumavhiki anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Tor 0.4.3.5 Python 2 kusvika ku3 yekuvandudza inosvika uye nezvimwe